बजारमा सिटामोलको अभाव ! – Nepal Online Khabar
भाद्र ५, २०७८ शनिबार 150
काठमाडौं : कोभिड–१९ महामारी रोकथाममा आम नागरिकको उपयोगी मानिने सिटामोल नेपाली बजारमा अभाव देखिएको छ । को’भिडको तेस्रो लहरको तरंग नेपालमा फैलिँदो क्रममा रहेका बेला सिटामोलको अभाव देखिएको हो ।
को’भिड वि’रुद्धको खोपबाहेक अन्य भरपर्दो निदानको उपाय यसको छैन । तथापि को’भिड लागेर ज्वरो, रुघाखोकी आएको खण्डमा सिटामोलको प्रयोगलाई चिकित्सा क्षेत्रले पनि प्रभावकारी उपायका रूपमा लिँदै आएको छ । यतिबेला बजारमा सिटामोल सहज रूपमा नपाइँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् ।
गुर्जुधाराकी सविना श्रेष्ठले भनिन्, ‘५ वटा पसल चहारेपछि बल्ल बल्ल छैटौं पसलमा सिटामोल एकपत्ता पाइयो ।’ उनले जस्तै सरोज उपकारेटीले पनि भाइलाई ज्वरो आएपछि बजारमा सिटामोल खोज्दा नपाएर वीर अस्पताल नै आउनुपरेको बताए ।
को’भिड क्रा’इसिसका कारण उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ पाउन नसकेकाले निजी कम्पनीको उत्पादन कम भएको केसी सुनाउँछन् । विभागमा पछिल्लो समय सिटामोलको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा दबाब र बहस दुवै चलिरहेको छ तर म’हामारीको समयमा सिटामोलको मूल्य बढाउँदा न्यायसंगत नहुने भएकाले त्यो कार्य तत्कालका लागि रोकिएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य यतिबेला १ हजार १५० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि उद्योगले सं’कट टार्नका लागि भारतबाट थोरै थोरै मात्रामा भए पनि
कच्चा पदार्थ निरन्तर खरिद गरेर उत्पादन गरिरहेको छ । वैकल्पिक कच्चा पदार्थका लागि चीनबाट पनि खरिद गर्न सकिन्छ तर टेन्डर लगायतका प्रक्रियामा २ महिना लाग्ने गर्छ । त्यसैले पनि सहज नभएसम्मका लागि भारतबाटै ल्याउने क्रम जारी राखेको उनले स्पष्ट पारे
Prevयस्ता छन् मनतातो पानीमा मरिच हालेर पिउनुका फाइदाहरु !
Nextओली–नेपालमाथि तेस्रो धारका नेताहरूको दबाब : तीन दिन एकताका लागि पहल गर्ने, नभए ८ भदौमा भेलामार्फन निर्णय लिने !